Abacre Yokusungula Ukuphathwa and Control - Main Page
We will khulula ubuchopho bakho ngokwenza smart software yethu
Abacre Yokusungula Ukuphathwa and Control
Subsribe kuya RSS feeds
Lobulungu nathi futhi uthole 5% kusuka kabusha ngokwenza isixhumanisi esilula kusayithi lethu!
Kuzuzwe ukulawula ngokugcwele kulesi sizukulwane next yokusungula ukuphathwa nokulawula!
Icala okufushane efakiwe-umnyuziki day-30 Thwebula ( 6,15 MB)
Buka uhlu izici ezinkulu
Lite vs Standard vs Amalayisense Professional sifake matrix
Top 10 izizathu ukuthenga Abacre Yokusungula Ukuphathwa and Control
Okusebenzayo ngokuphelele on Windows XP / 2003 / Vista / 2008 / Windows 7/8.
Abacre Yokusungula Ukuphathwa and Control isizukulwane esisha software yokusungula for Windows. Ihlanganisa yonke imisebenzi ukuthatha imiyalo, lokukhokhisa, uMphathi, futhi abale nokuphathwa yezabasebenzi. Zokusetshenziswa ukubonwa is ngokucophelela elungiselelwe for high speed uvo of oda a client kanye nokuvinjelwa amaphutha ezivamile. Ukuthi yenzelwe usebenzisa kumakhompyutha multiple, futhi iqukethe amazinga ukugunyazwa onokwethenjelwa evikelekile.
It isekela izindlela wokubala yokusungula ezivamile: LIFO, FIFO no Isilinganiso. Sales izinto kungahlanganisa ezahlukene izinto yokusungula njengoba izingxenye.
Isebenza ngayo yonke hardware ngokuvamile kusetshenziswa: touch izikrini, Pos Printers, line display (izigxobo), ukheshi kanye wokukha ibhakhodi abafundi (ikhodi bar scanner). Izakhiwo of the bill iklayenti kungenziwa egcizelele, kanti uhlelo kungenziwa umisele yisiphi zezimali, izintela, futhi nenombolo amafomethi. Izinkokhelo kungenziwa ngamukeleke ukheshi, credit cards noma amasheke.
Ukuze izimenenja, kukhona isethi ocebile imibiko ebonisa ukuthi isithombe oluphelele yokusungula kanye sales ukusebenza: esandleni yokusungula, inzuzo engenayo, yokuthengisa by period owanikwa, amahora lomthwalo high, Z-Out, abasebenzi kunazo esebenzayo, izindlela zokukhokha, futhi othomathikhi zentela ukubalisisa.
By ekwenzeni yonke yokusungula ukuphathwa nokulawula inqubo, isofthiwe kwenza ukusetshenziswa kangcono isikhathi yabasebenzi bakho namandla kakhulu ngcono inzuzo kanye nzuzo kwakho eyayithokala.
Kulula ukufaka futhi kulula ukuyisebenzisa. Very ilayisense ezingabizi ivumela le software ukuze kusetshenziswe kunoma yiziphi imvelo ezitolo ezincane single-computer okudayisa kuya amaketanga emikhulu nokudayisa nge checkout imizila multiple.
English , Afrikaans , Albania , Arabic , Armenian , Azerbaijani , IsiBasque , Belarusian , Bengali , Zulu , IsiBulgaria , Catalan , Cebuano , IsiShayina (Esenziwe lula) , IsiShayina (Traditional) , IsiCroatia , Czech , Danish , Dutch , Esperanto , Estonia , IsiFilipino , Finnish , French , Galician , IsiGeorgia , German , Greek , Gujarati , Creole angamaHaiti , Hausa , Hebrew , Hindi , Hmong , IsiHungary , Icelandic , Igbo , Indonesian , Irish , Italian , Japanese , Javanese , Kannada , Khmer , Korean , Lao , IsiLatvia , Lithuanian , EMakedoniya , IsiMalay , IsiMaltese , Maori , Marathi , Mongolian , Nepali , IsiNorway , Persian , Polish , IsiPutukezi , Punjabi , IsiRomania , Russian , Serbian , IsiSlovak , IsiSlovenia , Somali , Spanish , Swahili , Swedish , Tamil , Telugu , Thai , Turkish , Ukraine , Urdu , Vietnamese , IsiWelshi , Yiddish , Yoruba , Zulu
Ukuthi abantu bathini:
"Sekuyiminyaka sasisebenzisa owodwa MS dos restaurant Pos system kuze Ekugcineni sathola indawo enhle Windows-based: Abacre Restaurant Point yokuthengisa. Ngiqhathanisa it nezinye izinhlelo eziningi futhi ngayeka on artpos, ngoba kahle kwenziwe futhi kahle priced. Ngakho sathenga touch ngabaqaphi screen, amakhompyutha amasha kanye artpos. Ushintsho kusukela MS dos simiso esidala phakathi esisha system Windows-based kwaba amadlingozi: in artpos sisebenzisa imifanekiso for imenyu izinto for navigation ngokushesha, imibiko kukhona amazing kanye nohlelo ngokwayo impela okulungisekayo futhi Ukugunda. Kusukela ngaleso sikhathi I am a fan esichazayo of artpos mina batusa it nabangane bami ebhizinisini. "
NY, USA Funda kabanzi
Home | Imikhiqizo | Okulandwayo | Order | Support
Copyright © 2014 Abacre Limited . Wonke Amalungelo Agodliwe.